2016 – Year – Burmese Subtitle
IMDB: 7.1/10 184,898 votes
Captain America: Civil War (2016) Storyline Avengers တွေရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ၊ လူတွေသေကြေတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် Superhero တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဖိအားတွေများလာပါတယ်။ Iron Man ကတော့ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို တာဝန်ယူသင့်လို့ ထိန်းချုပ်မှုရှိသင့်တယ်လို့ မြင်ပြီး Captain America ကတော့ Superhero တွေက လူတွေကိုပိုမိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နှစ်ယောက်သားဦးဆောင်တဲ့ Superhero တွေဘက်ကွဲပြီး ကြားမှာ တင်းမာမှုတွေများလာတဲ့ကြားထဲ အနှောင့်အယှက်တွေလည်း ရှိလာတဲ့အခါ Civil War ဆီကိုဦးတည်လာပါတော့တယ်။ … Review အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ ကျွန်တော် MCU ရုပ်ရှင်ကားတွေ တော်တော်များများကို အားမရပါဘူး။ Avengers ဆိုလည်း နှစ်ကားလုံး အားမရပါဘူး။ Villain တွေကို နှိမ်ပြီး hero တွေကိုအသားပေးများလို့ပါ။ သဘောကျတာ Iron Man 1 နဲ့ Captain America: Winter Soldier တို့ပဲရှိပါတယ်။ ...
IMDB: 7.8/10 521,062 votes
Nerve (2016) Nerve ရုပ်ရှင်ဟာ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်အချိန် (Year 2020) လောက်ကို အခြေပြုထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအဓိကကတော့ ခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသလောက် အန္တာရယ်လည်းများလာတဲ့ internet နဲ့ mobile ခေတ်ကြီးရဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြထားတာပါ။ အခုအချိန်မှာ Pokemon Go လည်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီး လူကြိုက်များနေတော့ Nerve ရုပ်ရှင်ထွက်တဲ့အချိန်ဟာ တကယ့် အံကိုက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Nerve မှာလည်း ဘယ်နားသွားပြီး ဘာလုပ်ပါ။ လုပ်ရဲရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ Dare ပုံမျိုးတွေဆိုတော့ ပို hardcore ဖြစ်တာပေါ့။ Nerve ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့အချက်လေးတွေကတော့ အဲလို Augmented reality ပုံစံ game တွေကြောင့် လူတွေဟာ လောဘတွေတက်ပြီး အန္တရယ်ဘာညာတွေမရှောင် ရူးသွပ်ကုန်ကျတာကို ပြထားတဲ့အပြင် online မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ cyberbullying တွေကိုပါ ထည့်ပြသွားတာကိုပါ။ Online မှာကွကိုယ် လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်၊ အဲအတွက် ...
Sully (2016) — Storyline — US Airway လေကြောင်းအမှတ် 1549 ဟာ 2009 ခုနစ် Jan 15 ရက်နေ့မှာ လေယာဉ်ပျံတက်တက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ငှက်အုပ်တစ်အုပ်နဲ့ တိုးမိလို့ အင်ဂျင်နှစ်လုံးလုံးရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်ကို ပြန်ဖို့ အကြံပြုနေပေမဲ့ လေယာဉ် Captain ဖြစ်သူ Chesley Sullenberger ဟာ အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီး အနီးမှာရှိတဲ့ Hudson မြစ်အတွင်း ဆင်းခဲ့တာမှာ လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ 155 ယောက်လုံး အသက်သေခြင်းမရှိဘဲ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စစပိုင်းမှာတော့ သူ့ကို Hero အဖြစ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြကြပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းနဲ့ မြစ်ထဲဆင်းရခြင်းကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူတွေ အဖြေရှာကြတဲ့အခါမှာတော့ Captain Sully လည်း အခုကိစ္စမှာ အပြစ်ကင်းရဲ့လားဆိုပြီး မေးခွန်းတွေထွက်လာပါတော့တယ်။ . — Review — . ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း အခြေခံရုပ်ရှင်တွေရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုက သိကြမဲ့အတိုင်း ကိုယ်က ဇာတ်လမ်းနဲ့ အဖြေကို သိနေပြီးသားဖြစ်နေတာပါ။ အခုကားမှာလည်း ...
IMDB: 7.5/10 200,348 votes
Split (2016) X-Men ကားတွေမှာ ပရော်ဖက်ဆာ X အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီး wanted ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာကတည်းက မြန်မာပရိသတ်တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသား James McAvoy ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ psychological horror thriller အမျိုးအစားလို့ဆိုရအောင် ရသပေါင်းစုံနဲ့ခံစားရမယ့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတည်းမှာ လူနှစ်ယောက်စရိုက်ပါဝင်နေတာတို့၊ ဗီဇနှစ်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူဆိုတာမျိုးတို့ကို တခြား thriller ရုပ်ရှင်တွေမှာ ကျွန်တော်တုိ့ကြည့်ဖူးနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ နှစ်ဦးမကပဲ လူပေါင်းများစွာအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်တည်းကိုယ်ထဲမှာ အသွင်တွေကွဲနေတဲ့စိတ်ရောဂါမျိုး ခံစားနေရတဲ့ သူကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းကို အကြမ်းအရမ်းကြီးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအစကတည်းက ပရိသတ်ကို သို့လောသို့လောဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်က မိန်းကလေးသုံးယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပြီး အဲဒီလူက ဘာလဲ၊ သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာများလဲဆိုတာကို အဖမ်းခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေသာမက ကြည့်နေတဲ့သူကပါ မရိုးမရွဖြစ်လာအောင် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ဇာတ်လမ်းဇာတ်ရည်လည်လာတဲ့အခါကျပြန်တော့လည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ငယ်ဘ၀မှတ်ဥာဏ်တွေ child abuse လိုကိစ္စမျိုးတွေခံစားခဲ့ရသူတွေရဲ့ဘ၀ကိုပါ စာနာနားလည်လာအောင် ရိုက်ကူးပြသထားပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ wanted ကားမှာကတည်းက James McAvoy ကြီး မျက်နှာကြောနဖူးကြောကြီးထောင်လာအောင် စိတ်ဆိုးပြတာကို သဘောကျခဲ့တာမို့ အခုရုပ်ရှင်မှာလည်း လူ့စရိုက်ပေါင်းစုံကိုတစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုသဘောကျမိပါတယ်။ ...
IMDB: 7.3/10 346,272 votes
Rock Dog (2016) ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍအတွက် တော့ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ် အောင်လို့ 3D Animation ဇာတ်ကားလေး ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ Lionsgate ရုပ်ရှင်ထုတ် လုပ်ရေးကနေ ဖြန့်ချိမယ့် ဒီဇာတ် ကားလေးက ဂီတ ဝါသနာရှင် တိဗက်အိမ်စောင့်ခွေးလေး ဘိုဒီရဲ့ အကြောင်း ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ ခွေးလေး ဘိုဒီဟာ သူ့အဖေခမ်ပါရဲ့ လက် ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ် နောက်နှစ် မှာ သူ့ဒေသက သိုးတွေကို ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် အကြီး အကဲတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ နေပြီး အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘိုဒီက စိတ်မဝင်စားလှပါဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့ ဘိုဒီဟာ ရေဒီယိုတစ်လုံးကောက်ရခဲ့အပြီး မှာတော့ ရေဒီယိုကလွှင့်တဲ့ ရော့ခ် စတား ကြောင်တစ်ကောင် ဖြစ်တဲ့ အန်းဂက်စ်စကက်တာဂွတ်ရဲ့ သီချင်းကို နားထောင်ပြီးနောက် မှာ သူ့နှလုံးသားထဲက ဂီတဝါသနာပိုးတွေကြွလာပြီး သီချင်းဆိုချင်တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အ ထည်ဖော်ဖို့ ...